Usebhukule kwaze kwalunga embonini yefenisha oke wabhekana nokucwaswa. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Lowo wuNkk uDimpho Mpela, waseRoodepoort, eGauteng, umsunguli weHome and Décor Furniture, inkampani eyenza lonke uhlobo lwefenisha nokuhlobisa ayisungule ngo-2020 ngosizo lomyeni wakhe omxhase ngemali.
“Ngiqale leli bhizinisi ngoR40 000 engawunikwa wumyeni wami. Ngaphambi kokuqala ukwenza imali kulona, bengivame ukwenza ama-coffee table ngisebenzisa amathayi, ngenzela nabangani nabomndeni amatafula asekhishini.
“Kuthe sesingena esigabeni (sesihlanu)se-lockdown ngo-2020, ngabona ukuthi abantu abaningi badinga ifenisha yokushintsha amakhayo abo abe ngamahhovisi ngoba bephoqeleka ukusebenzela ekhaya ngenxa yokuvalwa kwezwe,” kulanda yena.
Eqala iHome and Décor Furniture ubesebenzela kwakhe, nokuthe ngokwanda komsebenzi odinga ukwenziwa, wathola indawo enkulu eCroesus, eGoli. unezisebenzi ezine aziqashile.
Uthi yize engabanga nenkinga yemali yokuqala ibhizinisi kodwa akubanga lula konke njengoba eke wabhekana nenselelo yokungakwazi ukusebenza ngokukhululeka ngenxa yokuthi wenza ibhizinisi okukhonya abantu besilisa kulo, abanye babo abebembuka njengesiphazamiso.
“Ngike ngaxhumana nezinye izinkampani eziphethwe ngabesilisa ngenhloso yokufunda okuthile kubona kodwa abanikazi bazo bangeluleka ngokuthi ngiliyeke phansi leli bhizinisi.
“Ngibashaye indiva bona nabanye abebengigxeka ngoba ngibona ukuthi abazimisele ngokungeseka, ngathola ezinye izindlela zokuqhubeka ngenze into engiyithandayo,” kuchaza uNkk uMpela.
Echaza ngendlela asebenzisana ngayo namakhasimende akhe, uthe ngenxa yokuthi iningi lawo liseGauteng kuba lula ukuvakashela emakhaya awo ukuze abone ukuthi adinga hloboluni lwefenisha nezinto zokuhlobisa.
“Ngihlale ngifuna ukuqonda ukuthi aphila mpiloni, ngibheke isimo sasemakhaya awo nokwakhekha kwawo. Loko kwenza kube lula ukuhlobisa nokwenza ifenisha ayifunayo ngoba ngisuke sengikuqonda ngokuphelele akudingayo,” kusho yena.